Uphuhliso lweNkampani | Ukupakisha kukaBeyin | |
Ukuphuhliswa kokupakisha kukaBeyin
IPhepha leKazuo kunye nePlastiki yokuPakisha Co., Ltd.yasekwa ngo-1998 kwindawo yokuqala, yaza yabizwa ngokuba yiXiongxian Shuangli Plastic Co, Ltd, eyayithengisa kakhulu iibhegi zeshirt ngelo xesha. Emva koko, saseka iBeijing Shuangli Shuoda Plastic Co, Ltd. kwaye saqhubeka nokwenza urhwebo iminyaka eli-10 de sakha umzi-mveliso wethu emva koko samisela iXiongxian Juren Paper Plastic Packing Co, Ltd. kwi-2009. Kwaye ngeli xesha, sanikezela Iingxowa zeMidlalo yeOlimpiki yaseBeijing ngo-2008, eyayililungelo elikhulu kuthi. Sijolise kurhwebo lwasekhaya ngelo xesha, emva koko, safumanisa ukuba maninzi amathuba avela kurhwebo lwamanye amazwe, kangangokuba siye sagqiba kwelokuba sizibandakanye, emva koko saseta isebe lethu lezorhwebo lamanye amazwe, kwaye sathatha inxaxheba kwi-116th- I-118th Canton Fair, kwaye iphumelele iziphumo ezigqwesileyo. Sazi ngakumbi kwaye safunda ngakumbi ngorhwebo lwamanye amazwe kunye nemiboniso eyahlukeneyo, kwaye ukuze sandise ishishini lethu, saseka i-Hebei Ruika yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kurhwebo.
Sasigcina ukufunda, ukufumana nokukhula, kude kube ngu-2017 urhulumente wethu eseke iXiong'an iNew Area apho umzi-mveliso wethu ukhona Emva koko sadibana nengxaki enkulu: ukusinda okanye ukutshatyalaliswa. Ukuba sifuna ukuqhubeka neshishini lethu, kufuneka sihambise umzi-mveliso wethu uye kwenye indawo, kwaye oko kubiza imali eninzi, ixesha, imali, abantu, njlnjl. Ukuba siyayeka, iya kuba yeyona ndlela ilula kodwa eyona ndlela ingenankathalo, siyazi ukujongana nabasebenzi bethu, ukuthengisa kunye nabathengi. Emva kokubandezeleka ixesha elide, sagqiba ekubeni siqhubeke. Ngethamsanqa, amagosa asuka kurhulumente weLiaoning atsala isimemo sokutyala imali, kwaye safumana omnye nomnye, emva koko safudukela kwiPhondo laseLiaoning, emva koko sakha umzi-mveliso wethu omtsha, nokuseka inkampani entsha, oko kukuthi iKazuo Beiyin Paper kunye nePlastic Packing Co., Ltd. sichithe unyaka, kuphela unyaka omnye sakha umzi-mveliso wethu omtsha, ongaphezulu kwama-4,000㎡, 7 iindibano zocweyo zale mihla.
Njengokukhokela kwezinye iinkampani ezisandula ukufuduswa, amagosa asekuhlaleni ahlala esiza kwaye atyelele inkampani yethu kwaye anike iingcebiso malunga nendlela esinokuyiphumelela ngayo. Sifumana inkxaso enkulu kurhulumente wethu, kwaye sihlawula kakhulu.
Siyakholelwa ukuba siza kuba ngcono kwaye sibe ngcono.